Maxay Saudi Arabia, Qatar iyo Turkey ugu hardamayaan Soomaaliya? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxay Saudi Arabia, Qatar iyo Turkey ugu hardamayaan Soomaaliya?
Maxay Saudi Arabia, Qatar iyo Turkey ugu hardamayaan Soomaaliya?
Dagaal loogu tala galay marin u helida dekedaha ayaa ka socda mid ka mid ah meelaha ugu nasiibka xun aduunka, Soomaaliya, hadda waxay ku sugan tahay halgan gobaleed u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraatka oo dhinac ah, iyadoo Qadar ay garab taagan tahay Turkiga dhinaca kale.
Khatar gelinta: maahan oo kaliya biyaha mashquulka ah ee xeebaha Soomaaliya,balse waxaa qeyb ka ah xasilloonida mustaqbalka dalka laftiisa.
Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal Sokooye mudo sanado ah,waxayna sanadihii ugu dambeeyay la daala dhaceysay sidii ay ku soo jiidan lahayd maalgashi shisheeye,laakiin xafiiltanka ka jira gacana carbeed ayaa dhalisay in si weyn loogu soo hanqal taago Soomaaliya.
Sanad ka hor, shirkad ay leedahay dowladda Isutagga Imaaraatka carabta ayaa saxiixday heshiis $ 336 milyan ah oo lagu ballaarinayo dekeda Bosaso, ee maamulka Puntlanad,taasi oo khilaaf xooggan oo u dhaxeeyo Dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland uu ka dhashay.
In ka yar hal sano ka hor, shirkad kale oo ay leedahay Imaaraatka ayaa la wareegtay dekeda Berbera ee ku taala waqooyiga Somalia ee Somaliland, waxayna ku yaboohday $ 440 milyan oo lagu horumarinayo. Bishii Maarso, Dowladda Itoobiya ayaa saami laga siiyay Dekadda Ber bera.
Isla mar ahaantaa, Turkiga, oo gacan saar la leh Qatar, ayaa iska kaashaday dadaallo balaayiin doollar ah oo lagu maalgelinayo Soomaaliya. Shirkad Turki ah ayaa maamusha dekada Muqdisho ilaa iyo sanadkii 2014, halka shirkadaha kale ee Turkiga ay dhiseen wadooyin, iskuulo, iyo isbitaallo.
Khilaafaadka ayaa sii xoogeysanayay tan iyo bishii Juun, markii dowladaha carabta ee ugu awooda badan, oo uu hogaaminayo Sacuudiga oo ay qeyb ka tahay Imaaraadka, ay xiriirka u jareen Qatar, iyagoo ku eedeeyay inay taageerto Iran iyo xagjiriinta Islaamiga ah.
Khilaafka Bariga Dhexe ayaa shidaal ku sii shubaya rabitaanka ah inuu xakameeyo Geeska Afrika iyo biyaheeda, sida ay sheegeen diblomaasiyiina, ganacsatada, aqoonyahannada iyo mas’uuliyiinta Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ku dhowdahay marinnada muhiimka ah ee saliida waxayna dekadahooda sidoo kale adeegsan karaan dhulka ku yaal Itoobiya, oo ay ku nool yihiin 100 milyan.
Wadamada khaliijka ayaa qarniyo xiriir ganacsi iyo mid diimeed la leh Soomaaliya, laakiin xiriirkaas hadda hawada ayuu sii galaya ka dib markii ay soo ifa baxeen Xiisado cusub.
“Soomaaliya waxay dadaal xooggan ku bixisay isku dayo kala duwan oo ah iney balaariso saameynteeda Ganacsi,Militari iyo Xeebta,” ayuu yiri Rob Malley, madaxweynaha kooxda xasaradda caalamiga ah.
Sida uu sheegay diblomaasi reer Galbeed ah oo ku sugan Geeska Afrika,Dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay sii kordhinayaan muuqaalka iyo aragtida Xeebaha Soomaaliya,iyadoo Jabuuti iyo Eriteriya dhanka waqooyi ka xigaan.
Dalalka Qatar iyo Turkiga ayaa maalgashigooda Soomaaliya wuxuu diirada saaray magaalada Muqdisho,waxayna si gaar ah taageero joogto ah u siiyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shaqaalahiisa,waxaana la aamisan yahay in doorashadii 2017,dii ee uu ku soo baxay Farmaajo dhaqaalo badan ay ku bixisay Xukuumadda Dooxa.
Sarkaal ka tirsan dowladda Qatar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in $ 385 milyan oo doollar ay ku bixiyeen kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada iyo gargaarka bini’aadannimo ee ay siiso dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Dowladda federaalka ah ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkan dambe si aad ah ula dhacsaneyn is-maamulada Puntland iyo Somaliland. waxayna sanadihii ugu dambeeyay u shaqeynayeen sidii waddan madax bannaan wuxuuna sannado badan doonayey inuu ka go’do Soomaaliya intee kale, laakiin kuma uusan guuleysan aqoonsi caalami ah.
Saameyn Xasaasi ah.
Wax ka yar toban sano ka hor, ma jirin wax dano ganacsi oo laga lahaa Soomaaliya.
2011,kii ayay markii la dareemay isbedel salbalaaran ka dib markii magaalada Muqdisho laga riixay Al-Shabaab,billo ka dib, Dowladda Turkiga ayaa bilowday caawinta dadkii ay abaarta saameynta ku yeelatay,wuxuuna Albaabada u furay mashaariicda hadda ka dhigaya maalgashadayaasha shisheeye ee ugu weyn Soomaaliya.
Dowladdu waxay rajeyneysaa maalgashi cusub, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha, inay dalka ka caawin karaan dib u dhiska.
Cashuur uruurinta wanaagsan ee dalka ka jirta ayaa kor u qaadeysa kobaca dakhliga,laakiin tani waxay dabooleysaa mushaharka shaqaalaha dawlada.Lacag Xooggan ayaa looga baahan yahay si loo dhiso wadooyinka,iskuulada iyo adeegyada kale ee aas aasiga ah,waxaana arintaas kaabay dhaqaalaha ka imaanaya Beesha caalamka iyo kuwa bariga dhexe.
Sidoo kale, warbixinta waxaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya soo gaaraya ay ka faa’ideystaan ururada argagixisada ee dalka ka jira gaar ahaan Al-Shabaab,kuwaas oo ku xooggan qeybo ka mid ah Soomaaliya.
Loolanka Khaliijka ayaa sidoo kale laga dareemayaa Gayiga Soomaaliya.
Bartamihii Abriil, Soomaaliya iyo UAE waxay joojiyeen iskaashi milatari. Ilaa iyo sanadkii 2014, Imaaraadku wuxuu tababareyey isla markaana bixin jiray mushaaraadka ciidamada Soomaaliya ee ku sugan Muqdisho, wuxuuna ka dhistay Puntland Ciidamado la magac baxay la-dagaallanka burcad-badeednimada. Boqolaal hub ah ayaa lagaga bililiqaystay xarunta tababarka ee magaalada Muqdisho markii ay ka baxday.
Arrintaan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada amniga Soomaaliya ay qabteen ku dhawaad 10 milyan oo doolar oo laga lahaa Imaaraadka,lacagtaas ayaa ujeedku ahaa in mushaar ahaan loo siiyo ciidanka Dowladda ee gacanta ay ku heysay imaaraadka. Imaaraadku waxa kale oo ay xireen cisbitaal bixiya daryeel bilaash ah.
Toddobaadkii hore mas’uuliyiinta Puntland waxay u safreen magaalada Dubai si ay ula kulmaan dhiggooda UAE iyo P&O, oo ah hay’ad dowladeed oo horumarineysa dekeddeeda.
“Maalgalin malaayiin doolar ah oo lagu sameeyo Soomaaliya xilligan muhiimka ah ee taariikhdu aad ayey muhiim noogu tahay,” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali.
Sidoo kale, mas’uuliyiinta Somaliland ayaa marti-geliyay diblomaasiyiinta UAE usbuucii hore si ay uga wada hadlaan “xoojinta xiriirka laba geesoodka ah”.
“Soomaalida laf ahaanteeda, nooca Ciyaartan oo kale oo loo yaqaano ciyaarta chess, halkaasoo Soomaaliya ay kali ku tahay khilaafka khaliijka, tani waa war xun,” ayuu yidhi Harry Verhoeven, oo ah bare wax ka dhiga Jaamacadda Georgetown ee Qatar.